Ehellu-suna Oo qorshe ay maamul ugu dhisayaan gobollada dhexe kala tashanaya DF (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 24, 2013 6:21 b 0
Guriceel, July 24, 2013 – Maamulka Ehellu-suna waljamaaca ayaa dhaq dhaqaaq siyaasadeed ka waday gobolka Galguduud bilihii la soo dhaafay, waxayna haatan shaaciyeen in ay wadaan qorshe lagu dhisayo maamul goboleed ay ku midaysan yihiin maamulada Galmudug, Ehellusuna, iyo Xibin iyo Xeeb.
Gudoomiyaha gudiga fulinta ee maamulka Ehellusuna sheikh Cabdi cali siidow ayaa isagoo ku sugan muqdisho wuxuu u sheegay Radio Daljir in ay qabanayaan shir dib u heshiisiin ah oo loo qabanayo beelaha dega deeganadaasi.
Shirkaasi oo ah mid balaaran sida uu hadalka u dhigay masuulka ka tirsan Ehellusuna waljamaaca, wuxuu sheegay in lagu gaari doono go?aan mideysan oo maamul rasmi ah loogu wada dhisayo gobollada dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan meelaha ay maamulada ka jiraan.
Sheikh Siidow ayaa sheegay in ay kulamo la yeelan doonaan Madaxda sar sare ee dawlada federalka Soomaaliya si ay ugala hadlaan arimahaan, waxaanse hadalka Ehellusuna ilaa hadda ka hadlin Xibin iyo Xeeb iyo Galmudug.
Dhegeyso weriye Jaamac Cabdiraxmaan oo waraystay Gudoomiyaha fulinta Ehellusuna Sheikh Siidow
Qarax khasaare u geystay dad rayid ah iyo saraakiil amaan Oo ka dhacay maanta Muqdisho(Dhegeyso)